Haweeneydii laga soo furtay Burcad Badeeda Soomaalida oo dib ula midowday Qoyskeeda (Daawo Sawirada) | shumis.net
Home » burcad badeed » Layaab » Haweeneydii laga soo furtay Burcad Badeeda Soomaalida oo dib ula midowday Qoyskeeda (Daawo Sawirada)
Haweeneydii laga soo furtay Burcad Badeeda Soomaalida oo dib ula midowday Qoyskeeda (Daawo Sawirada)
Haweeney Kenyan ah oo dhawaan Ciidamada Nabad Sugida Maamulka Galmudug xoog uga soo furteen Kooxo burcad badeed Soomaali ah ayaa dib ugu laabatay dalkeeda, waxa ayna mudo kadib a midowday Qoyskeeda iyo asxaabteeda.
Loise Njoki ayaa markii ku laabatay dalkeeda waxaa soo dhaweeyay qaar badan oo kamid ah Qoyskeeda iyo asxaabteeda kuwaa oo ku farxsanaa in ay dib u heshay xuriyadeeda kuna soo laabato dalkeeda iyada oo bad qabta.
Haweynedan ayaa markii ay Diyaarada ka degtay la kulantay gabadheeda iyo xubno kale oo Qoyskeeda kamid ah, waxaana wajigeeda laga dareemayay farxad badan iyadoona halkaasi iskula ooyeen qoyskeeda iyo asxaabteeda.
Waxa ay sheegtay Loise Njoki in ay farxad aad u weyn dareemeyso maadaama ay dalkeeda joogto dibna ula midowday qoyskeeda, waxa ayna tilmaantay in ay kasoo baxday nolol adag oo ku heesatay halkii lagu heestay.
Haweeneydan oo mudo labo sano ah gacanta ugu jirtay kooxo burcad badeed Soomaali ah ayaa dhawaan xoog looga soo furtay kadib howlgal qorsheesan ay fuliyeen Ciidamo katirsan Nabad Sugida Galmudug.
Title: Haweeneydii laga soo furtay Burcad Badeeda Soomaalida oo dib ula midowday Qoyskeeda (Daawo Sawirada)